Soo dejisan ADVANCED Codecs for Windows 13.1.4 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: ADVANCED Codecs for Windows
SARE Codecs for Windows – set ah codecs audio iyo video in loo maqli karo ugu ah qaabab file warbaahinta. software ayaa si toos ah badalay pack hadda ay u gaar ah si ay u bixiyaan waafaqid wanaagsan iyo maqnaanshaha of dhacyada nidaamka. SARE Codecs for Windows falgala ciyaaryahan kasta oo ay taageertaa loo maqli karo ee video Streaming ee daalacashada caanka ah. peculiarity ee software-ka waa uu maqan yahay ciyaartoyda dheeraad ah iyo la’aanta u baahan tahay in la beddelo ururada faylka. Sidoo kale SARE Codecs for Windows waa inay awoodaan inay ka saarto qaybaha gaarka ah ee xirmo.
Taageerada ugu of audio iyo video qaabab
bedelka Automatic ah codecs hadda ay u gaar ah
Isku dhex ciyaartoyda kasta
Ka kaxaynta oo ka mid ah qaybaha gaarka ah ee xirmo
Soo dejisan ADVANCED Codecs for Windows
Faallo ku saabsan ADVANCED Codecs for Windows
ADVANCED Codecs for Windows Xirfadaha la xiriira